သင့် Apple စက်ပစ္စည်းများ၏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း | ကျွန်တော်က mac ကပါ။
သင့် Apple စက်ပစ္စည်းများ၏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးကို လေ့လာပါ။
Manuel Alonso ၊ | | လဲ tutorial
စက်ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်မိသည့်အရာများထဲမှတစ်ခုမှာ ပရိုဂရမ်များစွာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဆောင်သည့်အခါ ၎င်း၏သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့် ၎င်း၏အမြန်နှုန်းတို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Mac တွင်၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအရာဖြစ်သည်။ M1 ချစ်ပ်အသစ်ဖြင့် ဤကွန်ပြူတာများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် ဆိုးရွားခဲ့သည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤ Macs အသစ်များကြောင့် များစွာပြောနေကြသည့် နောက်ထပ်အချက်တစ်ခုမှာ ကွန်ပျူတာစခရင်ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်းနှင့် ၎င်းတို့တွင် အမြင့်ဆုံးစွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ နှုန်းထားမြင့်လေ ပိုကောင်းလေမလား? ဒါပေမယ့် လန်းဆန်းမှုနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။ ငါ့အတွက် အသုံးဝင်မှာလား။. အဲဒါကို ဒီဆောင်းပါးမှာ ရှင်းပြဖို့ ကြိုးစားပါမယ်။
1 မျက်နှာပြင် လန်းဆန်းမှုနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။
1.1 refresh rate ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
2 ဒါကို သတိထားပါ။ ပြန်လည်စတင်မှုနှုန်းသည် နမူနာနှုန်းနှင့် မတူပါ။
3 Apple စက်ပစ္စည်းများတွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း
3.1 iPhone 12 နှင့် 13
3.2 Mac ကွန်ပျူတာများ
3.3 Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
မျက်နှာပြင် လန်းဆန်းမှုနှုန်းက ဘယ်လောက်လဲ။
refresh rate အကြောင်းပြောသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေခံအားဖြင့် ၎င်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည့် အရှိန်။ တိုင်းတာနိုင်သည့်အရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကို တစ်စက္ကန့်လျှင် ပုံများဖြင့် ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာရန် ဤအချိန်ရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ အကန့်တစ်ခု၏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် အသုံးပြုသည့် တိုင်းတာမှုယူနစ်မှာ Hertz (Hz) ဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါး၏အစတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်မေးခဲ့သော မေးခွန်းများထဲမှ တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ဖြေနိုင်နေပြီဖြစ်ပြီး၊ ဤစာကြောင်းများထက် အနည်းငယ်သာရှိသည်။ မျက်နှာပြင်တစ်ခု၏ refresh rate မြင့်လေ၊ fluidity ပိုများလေဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပေါ်လာသော ရုပ်ပုံများကို ပြသထားသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ထိုအချိန်အတွင်း ထိုပုံတစ်ပုံချင်းစီကြားတွင် ဖြတ်သန်းသွားသောအချိန်၌၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဓိက အပ်ဒိတ်တစ်ခု ရှိပါမည်။ အခုတော့ တောက်ပြောင်နေတဲ့ ရွှေတွေ မဟုတ်ဘူး။ ဆက်စပ်အားနည်းချက်များ ဆက်တိုက်ရှိနေကြောင်းနှင့် ယခုကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့်အကြောင်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ သို့သော် ပုံတစ်ပုံသည် စကားလုံးတစ်ထောင်တန်ဖိုးရှိသည်ဟု မကြာခဏပြောလေ့ရှိသောကြောင့် ဤရှင်းလင်းချက်ပြသသည့် ဗီဒီယိုဖိုင်ကို သင့်အား ချန်လှပ်ထားခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဖုန်းများ၊ ကွန်ပျူတာများနှင့် မျက်နှာပြင် စက်ပစ္စည်းအများစုမှာ t၎င်းတို့သည် 60 Hz refresh rate ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိုနှုန်းထားများသည် မူးဝေသည့်ကိန်းဂဏန်းများအထိ ရောက်ရှိနေသည့် ကွန်ပျူတာများ ရှိနေသည်မှာ မှန်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် 144 Hz အထိ ကိန်းဂဏန်းများကို ရရှိနိုင်သည့် စမတ်ဖုန်းများလည်း ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မြင်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း မြင့်မားသော refresh rate ကိုရောက်ရှိခြင်းသည် ချောမွေ့သောရုပ်ပုံများကို ဆိုလိုပြီး ပိုကြည့်ကောင်းရုံသာမက အမြင်အာရုံပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလည်း များစွာလျှော့ချပေးနိုင်သောကြောင့် ကောင်းပါတယ်။ အရေးကြီးသည်မှာ နည်းပညာနှင့် မျက်နှာပြင်ပြသမှုများသည် ပို၍အရေးကြီးပြီး မရှိမဖြစ်လိုအပ်လုနီးပါးရှိသည့် ကမ္ဘာတစ်ခုတွင် အရေးကြီးပါသည်။
ဤမြင့်မားသော refresh rate များသည် Gamers များအတွက် စက်ပစ္စည်းများတွင် ပါဝင်သည်ဟု အမြဲပြောနေသော်လည်း၊ စျေးကွက်နယ်ပယ်သည် ချဲ့ထွင်နေပြီဖြစ်သည်ကို သတိပြုရမည်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်က ဖုန်းများနှင့် Tablet အများအပြားတွင် ၎င်းကို ပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်သည်။. ဥပမာ iPad Pro နှင့် iPhone 12 နှင့် 13 တို့၏ ဥပမာ ရှိသည်။
refresh rate ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
ဒါပေမယ့် ရှက်စရာပါ။ အားလုံးက အားသာချက်တွေ မဟုတ်ဘူး။ မြင့်မားသော refresh rates တွင်။ အရာအားလုံးတစ်ခုလုံးကို အကဲဖြတ်ဖို့ လိုအပ်ပြီး အဲဒါက ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာကို အခုပဲသိတော့ အဲဒါ ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာ ကြည့်ကြရအောင်။
ချောမွေ့မှုနှင့် ချောမွေ့မှု။ ဒါကရှင်းပါတယ်။ စက်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ ဖန်သားပြင်၏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း မြင့်မားလေ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ရုပ်ပုံများ၏ ချောမွေ့မှုနှင့် ချောမွေ့မှု ပိုမိုရရှိစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် iPhone ပေါ်တွင် scroll သို့မဟုတ် mouse ကို Mac ပေါ်ရှိ ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုမှ မောက်စ်ကို လျင်မြန်စွာရွှေ့သောအခါ သို့မဟုတ် အပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ရွှေ့သောအခါတွင် ပြောင်းလဲမှုများသည် ပိုမိုချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် ပိုမိုဖော်ရွေလာလိမ့်မည် .
ပိုမိုမြင့်မားသော refresh rate ကိုဆိုလိုသည်။ မျက်စိညောင်းတာ သက်သာတယ်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖန်သားပြင်များနှင့် အတွေ့အကြုံကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ခံစားနိုင်စေရန်။
မြင့်မားသော refresh rate ရှိခြင်း၏ အဓိကအားနည်းချက်မှာ သံသယဖြစ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုစက်ပစ္စည်းတွင် စွမ်းအင်အသုံးစရိတ် ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နည်းပါးသောကြောင့်၊ iPhone များတွင်၊ ဘက်ထရီပိုကြီးသော Pro မော်ဒယ်များတွင်သာ ထည့်သွင်းထားသည်။
120Hz refresh rate ဖြင့် အကြောင်းအရာအားလုံးကို မရရှိနိုင်ပါ။ ၎င်းသည် 8K အကြောင်းအရာကို ဖွင့်နိုင်သော ရုပ်မြင်သံကြားရှိခြင်းနှင့် တူသည်။ ဒါကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာ သူ့ဟာသူ 8K မဟုတ်ရင် ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဂရုမစိုက်ပါဘူး။
မျက်နှာပြင် ပိုကြီးလေ၊ refresh rate မြင့်လေ၊ device က ပိုဈေးကြီးတယ်။
ဒါကို သတိထားပါ။ ပြန်လည်စတင်မှုနှုန်းသည် နမူနာနှုန်းနှင့် မတူပါ။
မကြာသေးမီလများအတွင်း၊ ဖန်သားပြင်ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှု၏ 60 Hz အတားအဆီးထက်ကျော်လွန်နေသော စက်ပစ္စည်းများကို တင်ပြခဲ့သည့် ထုတ်လုပ်သူအချို့ကလည်း အဆိုပါအချက်ကို ကိုးကားဖော်ပြခဲ့ကြသည်။ panel နမူနာနှုန်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Samsung စက်ပစ္စည်းအချို့ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ၎င်း၏စခရင်ကို 120 Hz တွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားပြီး နမူနာနှုန်း 240 Hz ရှိကြောင်း ကြော်ငြာထားသည်။
Hertz ဖြင့် တိုင်းတာသည့် နမူနာနှုန်းသည် စခရင်မှ ထိတွေ့ထည့်သွင်းသည့် အကြိမ်အရေအတွက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကြိမ်နှုန်းတန်ဖိုးမြင့်လေ၊ ထိတွေ့ latency သို့မဟုတ် နိမ့်လေဖြစ်သည်။ input ကိုသုံးနေပြီပြီးတော့ လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ ပျော့ပျောင်းမှုနဲ့ ပေါ့ပါးမှုရဲ့ ခံစားချက်ကို ပိုကြီးစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဤနေရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသောသူနှင့် ဘာမှမဆိုင်ပါ။ မရှုပ်ကြနှင့်။ ယုတ္တိဗေဒအရ၊ နှုန်းနှစ်ခုလုံးမြင့်လေ၊ ပိုကောင်းလေဖြစ်သည်။
Apple စက်ပစ္စည်းများတွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်း
စက်ပစ္စည်းစခရင်အား ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းတွင် "ကျွမ်းကျင်သူများ" ဖြစ်လာပြီး ၎င်းကို နမူနာကြိမ်နှုန်းနှင့် မည်သို့ခွဲခြားရမည်ကိုပင် သိရှိပြီးသည်နှင့် Apple ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ဘယ်စက်ပစ္စည်းတွေက နှုန်းထားတွေ ပိုမြင့်ပြီး ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲ။
iPhone 12 နှင့် 13
iPhone 12 နှင့် 13 နှစ်ခုစလုံးတွင် 120 Hz အထိ refresh rate ရှိသော စခရင်များရှိသည်။ သို့သော် iPhone မော်ဒယ်များအားလုံးတွင် တူညီသောနှုန်းထားမျိုးမဟုတ်သည်ကို သတိထားပါ။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အမြင့်ဆုံးနှုန်းအမြင့်ဆုံးမော်ဒယ်များတွင်လာ. Pro မော်ဒယ်များတွင် 120HZ ရှိပါမည်။ အခြေခံအားဖြင့် ဘက်ထရီပြဿနာနှင့် terminal ၏အသုံးပြုမှုကြာချိန်အတွက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သူတို့သည် iPhone mini တွင်ထိုအရည်အသွေးရှိသောစခရင်ကိုထည့်ထားပါကနေ့တစ်ဝက်တွင်ပလပ်တစ်လုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှ အကျဉ်းချုပ် iPhone ၏ refresh rate သည် ဤကဲ့သို့သော၊
iဖုန်း 13 Pro နှင့် iPhone 13 Pro Max ၎င်းတို့တွင် Apple ၏နောက်ဆုံးထွက် Super Retina XDR ကို ProMotion ဖြင့်ပြသထားပြီး၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော refresh rate 10Hz မှ 120Hz အထိရှိသည်။ iPhone 13 နှင့် iPhone 13 Mini တို့သည် 60Hz ကိုအသုံးပြုသည်။
iPhone 12 မော်ဒယ်များအတွက်လည်း အလားတူပါပဲ။
iPhone တွင် ProMotion၊ Macs များပါရှိလျှင် မည်သို့နည်း။ ဒါပေမယ့် Macs တိုင်းဟာ ကွန်ပြူတာတွေဖြစ်လို့ မြင့်မားတဲ့ refresh rates ပါတဲ့ ဖန်သားပြင်တွေရှိရမယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ နှုန်းထားမြင့်လေ၊ မျက်နှာပြင်ကြီးလေလေ၊ စျေးပိုကြီးလေဆိုတာ သင်သိပြီးသားပါ။ တကယ်တော့ မော်ဒယ်အချို့တွင် ၎င်းတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် 120 Hz display များရှိသည်။
ကြီးကျယ်သော အသစ်အဆန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၃ လက်မနှင့် ၁၅ လက်မ MacBook Pros အသစ်များ ဒါဟာအတိအကျပါပဲ။ Mini-LED မျက်နှာပြင်သည် ProMotion ကြောင့် 120 Hz refresh rate အထိ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့် အသက်သွင်းရမည့် ProMotion။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုနှုန်းကို ကွဲပြားနိုင်သည်ဟု ပင်ကိုယ်သဘောပေါက်နေပြီဖြစ်သည်။ အခြားယခင် Macs များတွင် ၎င်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်သောကြောင့် အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပေ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိရင်၊ ဒီမှာသင်ခန်းစာရှိတယ် 16-လက်မ MacBook Pro တွင် ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းကို သင်မည်ကဲ့သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် 60 မှ 47,95 Hz သို့သွားနိုင်သည်။
သို့သော်၊ 120 Hz ၏ ဤကြိမ်နှုန်းကို လောလောဆယ်တွင် အပလီကေးရှင်းအားလုံးမှ ပံ့ပိုးမထားပါ။ တကယ်တော့ Safari က ဥပမာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ မဖြစ်သေးပါဘူး။ သို့သော် Safari နည်းပညာကို အစမ်းကြည့်ရှုခြင်း၊ Safari ၏ beta ဗားရှင်း၊ ဟုတ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဤဘရောက်ဆာ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်း 135 တွင် အတိအကျဖြစ်သည်။Apple မှ ProMotion အတွက် အထောက်အပံ့ကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
သိချင်ရင် ပြောပြမယ်။ မရှိ ProMotion ပါသော iMac မရှိပါ။. ဒါပေမယ့် ရှိလိမ့်မယ်။
ငါမင်းကို အံ့အားသင့်စေမယ့်သူမဟုတ်ပေမယ့် မင်းစိတ်ကူးထားတဲ့အတိုင်း Apple Watch ၎င်းတွင် ProMotion မျက်နှာပြင်မရှိပါ။ ၎င်းသည် အလွန်ကောင်းမွန်သော Retina မျက်နှာပြင်၊ ဟုတ်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် 120Hz နှုန်းကို မထိပါဘူး။ အဲဒါတွေကို မလိုအပ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
သင်နှစ်သက်သော စက်ပစ္စည်းများ၏ ဤသွင်ပြင်လက္ခဏာများအကြောင်း အနည်းငယ်ပိုသိပြီးဖြစ်သည်။ ထံမှ ယခု ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းကို သင်ပိုအာရုံစိုက်လာမှာ သေချာပါတယ်။ terminal အသစ်ဝယ်တဲ့အခါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » သင့် Apple စက်ပစ္စည်းများ၏ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုနှုန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးကို လေ့လာပါ။